UMTHETHO WABUCALA - UMTHETHO WABUCALA
Eyona Umthetho Wabucala
Silungiselele esi saziso sabucala (Isaziso sangasese, iSaziso, uMgaqo-nkqubo wabucala, okanye umgaqo-nkqubo) ukukuchazela indlela esiyiqokelela, siyisebenzisa, kwaye sabelane ngayo ngolwazi kunye neNkcukacha zaBantu (njengoko kuchaziwe kumthetho ofanelekileyo) esiwufumana ngokusebenzisa i-Intanethi , ii-aplikeshini kunye neenkonzo ezikwi-Intanethi (IiNkonzo) ezisebenza, ezilawulwa okanye ezinxulumene neBill Simmons Media Group. Esi Saziso Sobumfihlo sigubungela kuphela ulwazi oluqokelelwe kwiiNkonzo nangonxibelelwano oluthe ngqo phakathi kwakho noBill Simmons Media Group, kwaye alugubungeli naluphi na ulwazi oluqokelelwe nakweyiphi na enye iwebhusayithi, isicelo okanye ngenye indlela kuthi (ngaphandle kokuba kuchaziwe ngokuthe ngqo), kubandakanya xa usitsalela umnxeba. , usibhalele, okanye unxibelelane nathi ngayo nayiphi na indlela ngaphandle kweeNkonzo. Ngokusebenzisa iiNkonzo, uyavuma ukuqokelelwa, ukusetyenziswa kunye nokwabelana ngolwazi lwakho kunye neDatha yobuqu kwaye uyavuma ngokwemigaqo yesi Saziso Sobumfihlo.
Ulwazi Siqokelela ngokuzenzekelayo
Iicookies / iTekhnoloji yokuKhangela
Ulwazi Olukhetha Ukungenisa
Iinkcukacha esizifumana kweminye imithombo
Inethiwekhi yokuNxibelelana kunye neQonga lokudityaniswa
Iindlela zethu zokwabelana ngolwazi
Abasebenzisi abangaphandle kweUnited States kunye neMvume yokuGqithisela
Ulwazi olubalulekileyo kubahlali baseCalifornia: Amalungelo akho abucala eCalifornia
Siphendula njani ukuba singazilandeli imiqondiso
Ukhetho / Ukukhetha ukuphuma kunxibelelwano
Ukugcina, ukuLungisa kunye nokucima iiNkcukacha zaKho
Amalungelo eSifundo seDatha ye-EU
Iindidi zoLwazi. Thina nababoneleli beenkonzo zomntu wesithathu (kubandakanya nawuphi na umxholo womntu wesithathu, intengiso, kunye nabanikezeli bohlalutyo) siqokelela ngokuzenzekelayo ulwazi oluthile kwisixhobo sakho okanye kwisikhangeli sewebhu xa unxibelelana neeNkonzo ukusinceda siqonde indlela abasebenzisi bethu abazisebenzisa ngayo iiNkonzo kunye ukujolisa kuwe (esiya kuthi sakubhekisa kuyo kwesi Saziso Sobucala ngokudibeneyo njengeDatha yokuSebenzisa). Umzekelo, ngalo lonke ixesha undwendwela iiNkonzo thina kunye nabanikezeli beenkonzo zomntu wesithathu siqokelela ngokuzenzekelayo indawo okuyo, idilesi ye-IP, isixhobo sokuchonga isixhobo esiphathwayo okanye esinye isazisi esikhethekileyo, isikhangeli kunye nohlobo lwekhompyuter, umboneleli wesevisi ye-Intanethi osetyenzisiweyo, ulwazi lokucofa, ixesha lokufikelela, ixesha Iphepha leWebhu ovela kulo, i-URL oya kuyo ngokulandelayo, iphepha (le) leWebhu ofikelela kulo ngexesha lotyelelo lwakho kunye nokunxibelelana kwakho nomxholo okanye intengiso kwiiNkonzo. Sinokwenza isivumelwano nabantu besithathu ukuba siqokelele olu lwazi egameni lethu ngeenjongo zohlalutyo. Oku kubandakanya iinkampani ezinje ngeChartbeat, Comscore kunye noGoogle.
Iinjongo zolu Lwazi. Thina nababoneleli beenkonzo zomntu wesithathu sisebenzisa iiDatha zokuSebenzisa ngeenjongo ezahlukeneyo kubandakanya ukufumanisa iingxaki kwiiseva zethu kunye nesoftware, ukulawula iiNkonzo, ukuqokelela ulwazi lwendawo yokuhlala kunye nokujolisa kwintengiso kuwe kwiiNkonzo nakwezinye iindawo ezikwi-Intanethi. Ngokunjalo, uthungelwano lwethu lwentengiso lomntu wesithathu kunye neeseva zentengiso ziya kusinika ulwazi, kubandakanya neengxelo eziza kusixelela ukuba zingaphi iintengiso ezenziweyo zaza zacofwa kwiiNkonzo ngendlela engazichazanga ngokobuqu umntu othile. Idatha yokuSebenzisa esiyiqokelelayo ngokubanzi ayichongi, kodwa ukuba siyayinxulumanisa nawe njengomntu othile ochongiweyo, siya kuyiphatha njengeDatha yobuqu.
Sisebenzisa itekhnoloji yokulandela umkhondo, ezinje ngecookie, ukugcinwa kwendawo, kunye neethegi zepikseli.
Iicookies kunye noGcino lwasekhaya
Iicookies kunye nokugcinwa kwasekhaya kungasetwa kwaye kufikeleleke kwikhompyuter yakho. Kutyelelo lwakho lokuqala kwiiNkonzo, ikuki okanye ugcino lwasekhaya luya kuthunyelwa kwikhompyuter yakho echonga ngokukodwa isikhangeli sakho. Iicookies kunye nokugcinwa kwendawo ziifayile ezincinci ezinomtya weempawu ezithunyelwa kwisikhangeli sekhompyuter yakho kwaye zigcinwe kwisixhobo sakho xa undwendwela iwebhusayithi. Uninzi lweenkonzo eziphambili zeWebhu zisebenzisa ii-cookies ukubonelela ngeempawu eziluncedo kubasebenzisi bazo. Indawo nganye yeWebhusayithi inokuthumela ikuki yayo kwisikhangeli sakho. Uninzi lweebrawuza ziqala ukuseta ukwamkela ii-cookies. Ungaseta kwakhona isikhangeli sakho ukuba saliwe zonke iicookies okanye ubonise xa ikuki ithunyelwa; Nangona kunjalo, ukuba uyala iicookies, awuyi kuba nakho ukungena kwiiNkonzo okanye uthathe ithuba elipheleleyo ngeeNkonzo zethu. Ukongeza, ukuba ucoca zonke ii-cookies kwisikhangeli sakho nangaliphi na ixesha emva kokumisela isikhangeli sakho ukuba singavumi zonke ii-cookies okanye ubonise xa ikuki ithunyelwa, kuya kufuneka uphinde usete kwakhona ibrawuza yakho ukwala zonke ii-cookies okanye ubonise xa kuthunyelwa ikuki .
Funda umgaqo-nkqubo weKuki.
Iinkonzo zethu zisebenzisa ezi ntlobo zicookies kwezi zinto zilandelayo:
Uhlalutyo kunye neeKuki zeNtsebenzo Ezi cookies zisetyenziselwa ukuqokelela ulwazi malunga nokugcwala kwiiNkonzo zethu kunye nendlela abasebenzisi abazisebenzisa ngayo iiNkonzo zethu. Ulwazi oluqokelelweyo aluchazi mndwendwe ngamnye. Ulwazi ludityanisiwe kwaye ke aluchazwanga. Ibandakanya inani labakhenkethi kwiiNkonzo zethu, iiwebhusayithi ezibathumele kwiiNkonzo zethu, amaphepha abebendwendwele kwiiNkonzo zethu, ngabaphi ixesha losuku abatyelele ngalo iiNkonzo zethu, nokuba bakha bazityelela na iiNkonzo zethu ngaphambili, kunye nezinye iinkcukacha ezifanayo. Sisebenzisa olu lwazi ukunceda ukuqhuba iiNkonzo zethu ngokufanelekileyo, ukuqokelela ulwazi olubanzi lwabantu kunye nokujonga inqanaba lomsebenzi kwiiNkonzo zethu. Sisebenzisa uhlalutyo lukaGoogle ukulungiselela le njongo. Uhlalutyo lukaGoogle lusebenzisa iicookies zalo. Isetyenziswa kuphela ukuphucula indlela ezisebenza ngayo iinkonzo zethu. Unokufumana ulwazi ngakumbi malunga neicookies zikaGoogle zokuhlaziya Apha . Unokufumana ngakumbi malunga nokuba uGoogle uyikhusela njani idatha yakho apha. Unokuthintela ukusetyenziswa kweGoogle Analytics enxulumene nokusetyenziswa kweenkonzo zethu ngokukhuphela kunye nokufaka iplagi yesikhangeli ekhoyo Apha .
IiKuki zeNkonzo Ezi kuki zibalulekile ukubonelela ngeenkonzo ezifumanekayo kwiiNkonzo zethu kunye nokwenza ukuba ukwazi ukusebenzisa amanqaku ayo. Umzekelo, bayakuvumela ukuba ungene kwiindawo ezikhuselekileyo zeeNkonzo zethu kwaye uncede umxholo wamaphepha owacela ukulayishwa ngokukhawuleza. Ngaphandle kwezi kuki, iinkonzo ozicelileyo azinakubonelelwa, kwaye sisebenzisa ezi cookies ukubonelela ngezo nkonzo.
Ukusebenza kweeKuki Ezi khukhi zivumela iiNkonzo zethu ukuba zikhumbule izinto ozikhethayo xa usebenzisa iiNkonzo zethu, njengokukhumbula ulwimi lwakho, ukukhumbula iinkcukacha zakho zokungena, ukukhumbula ukuba zeziphi iipoll ozivotileyo kwaye kwezinye iimeko, ukukubonisa iziphumo zovoto nokukhumbula utshintsho wenza kwezinye iindawo zeenkonzo zethu onokuthi uzenze ngokwezifiso. Injongo yezi khukhi kukubonelela ngamava obuqu ngakumbi kwaye ukunqande ukuba uphinde ufake izinto ozikhethayo ngalo lonke ixesha undwendwela iiNkonzo zethu.
IiKuki zeNtanethi yezoLuntu Ezi cookies zisetyenziswa xa wabelana ngolwazi usebenzisa iqhosha lokwabelana ngemidiya yoluntu okanye iqhosha lokuthanda kwiiNkonzo zethu okanye uqhagamshela iakhawunti yakho okanye uzibandakanya nomxholo wethu kwiwebhusayithi yokunxibelelana nabantu enje nge-Facebook, i-Twitter, i-Instagram okanye ezinye. Inethiwekhi yokuncokola iya kurekhoda ukuba uyenzile le nto kwaye uqokelele ulwazi oluvela kuwe olunokuba yiDatha yobuqu.
Iicokies ekujoliswe kuzo kunye nentengiso Ezi cookies zilandelela imikhwa yakho yokukhangela ukuze sikwazi ukubonisa intengiso enokubangela umdla kuwe. Ezi cookies zisebenzisa ulwazi malunga nembali yakho yokukhangela kwiqela kunye nabanye abasebenzisi abanomdla ofanayo. Ngokusekwe kolo lwazi, kunye nemvume yethu, abathengisi bomntu wesithathu banokubeka ii-cookies ukubenza babonise iintengiso esicinga ukuba ziya kufaneleka kwimidla yakho ngelixa ukwiwebhusayithi yomntu wesithathu. Ezi kuki zigcina indawo okuyo, kubandakanya ubude, ubude, kunye ne-ID yommandla weGeoIP, esinceda ukuba sikubonise iindaba ezithile ezikwindawo kwaye ivumela iiNkonzo zethu ukuba zisebenze ngokufanelekileyo.
I-cookie ekwiFlash yifayile yedatha ebekwe kwisixhobo nge-Adobe Flash plug-in eyakhelweyo ngaphakathi okanye ekhutshelwe nguwe kwisixhobo sakho. I-Flash cookies zisetyenziselwa iinjongo ezahlukeneyo, kubandakanya, ngaphandle komda, ukwenza inqaku leFlash kunye nokukhumbula ukhetho lwakho. Ngolwazi oluthe kratya malunga neFlash kunye nokhetho lwabucala olunikezelwa yiAdobe, ndwendwela Apha . Ukuba ukhetha ukulungelelanisa useto lwangasese lweFlash kwisixhobo sakho ezinye zeenkonzo zinokungasebenzi kakuhle.
Sikwasebenzisa iithegi zepikseli, eziziifayile ezincinci zemizobo esivumela thina nabantu besithathu ukuba sibeke iliso ekusetyenzisweni kweeNkonzo kunye nokuqokelela idatha yoSetyenziso. Ithegi yepikseli inokuqokelela ulwazi olufana nedilesi ye-IP yekhompyuter ekhuphele iphepha elivela kuyo ithegi; i-URL yephepha elibonakala kuyo ithegi yepikseli; ixesha (kunye nobude bexesha) iphepha eliqulathe i-pixel tag liye lajongwa; uhlobo lwesikhangeli esikhuphele ithegi yepikseli; kunye nenombolo yokuchonga nayiphi na ikuki ebekwe ngaphambili yile seva kwikhompyuter yakho.
Sisebenzisa iiphikseli zepikseli, ezinikelwe sithi okanye ngabathengisi bomntu wesithathu, ababoneleli ngeenkonzo kunye neenethiwekhi zentengiso, ukuqokelela ulwazi malunga notyelelo lwakho, kubandakanya namaphepha owabonayo, amakhonkco onqakraza kunye namanye amanyathelo athathwe ngokunxulumene neendawo zethu kunye Iinkonzo kwaye uzisebenzise ngokudibanisa neicookies zethu ukubonelela ngeenkonzo kunye nolwazi olunomdla kuwe. Iimpawu zePixel zenza ukuba iinethiwekhi zentengiso zikunike iintengiso ezijolise kuwe xa undwendwela iiNkonzo okanye ezinye iiwebhusayithi.
Ifayile yelog yifayile erekhoda imicimbi eyenzeka ngokunxibelelene nokusetyenziswa kwakho kweNkonzo, njengedatha yokusebenzisa inkonzo yakho.
Ukuprintwa kweminwe yesixhobo
Iitekhnoloji zeApple, ubuNtu, kunye nokuSebenzisa
Kukho iintlobo ngeentlobo zobuchwephesha bokulandela umkhondo obunokuthi bubandakanywe kwiiapps zethu esivumela ukuba siqokelele ulwazi malunga nofakelo, ukusetyenziswa, kunye nokuhlaziywa kweapps zethu kunye nolwazi malunga nesixhobo sakho, kubandakanya nesazisi sakho esisodwa (UDID) kunye nobunye ubuchwephesha. izazisi. Ngokukodwa, obu buchwephesha bokulandela umkhondo busivumela ukuba siqokelele idatha malunga nesixhobo sakho kunye nokusetyenziswa kweapps zethu, amaphepha, iividiyo, okunye umxholo, okanye iintengiso ozibonayo okanye onqakraza kuzo ngexesha lotyelelo lwakho kwaye nini kwaye wenza ixesha elingakanani, kwaye izinto ozikhuphelayo. Obu buchwephesha bokulandela umkhondo abusekelwanga kwisikhangeli njengeicookies kwaye abanakulawulwa siseto sesikhangeli. Umzekelo, ii -apps zethu zinokubandakanya ii-SDKs zomntu wesithathu, eyikhowudi ethumela ulwazi malunga nokusebenzisa kwakho iseva, kwaye isebenza ngohlobo lokusebenza kwepikseli. Ezi SDKs zisivumela ukuba silandelele uguquko lwethu kwaye sinxibelelane nawe kwizixhobo zonke, zikuzisele intengiso zombini ngaphakathi nangaphandle kweSayithi, wenze ngokwezifiso iapps kwimidla yakho kunye nezinto ozikhethayo kwaye uqhagamshele kuwo onke amaqonga nezixhobo, kwaye ikunikeze ngokusebenza okongeziweyo, okunje Ukukwazi ukudibanisa iSayithi lethu kunye neakhawunti yakho yemidiya yoluntu.
Itekhnoloji yokuchonga indawo
IGPS, iWiFi, iBluetooth, kunye nobunye ubuchwephesha bokwazi indawo bunokusetyenziselwa ukuqokelela idatha yendawo echanekileyo xa uvumela iinkonzo ezisekwe kwindawo ngesixhobo sakho. Idatha yendawo ingasetyenziselwa iinjongo ezifana nokuqinisekisa indawo yesixhobo sakho kunye nokuhambisa okanye ukuthintela umxholo ofanelekileyo kunye nentengiso esekwe kuloo ndawo.
Ukongeza, sisebenzisa ubuchwephesha obahlukeneyo obuqokelela ulwazi olufanayo kukhuseleko kunye neenjongo zokufumanisa ubuqhetseba eziyimfuneko ekusebenzeni kweendawo zethu kunye neshishini.
Ngolwazi oluthe kratya malunga nokusetyenziswa kweicookies kunye netekhnoloji efanayo kwiSayithi yethu, nceda uphonononge icandelo le-13 lesi Saziso sabucala kunye neeKuki zethu kunye noMgaqo-nkqubo weTekhnoloji yoLandelo. Unokufumana ulwazi ngakumbi malunga neicookies kunye nendlela ezisebenza ngayo, zeziphi iicokies ezisetiweyo kwikhompyuter yakho okanye isixhobo esiphathwayo kunye nendlela yokuzilawula nokuzicima Apha kwaye Apha .
Ungandwendwela iiNkonzo ungakhange usixelele ukuba ungubani okanye uveze naluphi na ulwazi umntu anokukuchonga ngalo njengomntu othile, esiya kuthi sibhekise kuye kwiSaziso saBucala ngokudibeneyo njengeDatha yobuNtu). Ukuba, nangona kunjalo, unqwenela ukubhalisa ukuze ube lilungu leeNkonzo, kuya kufuneka unikezele ngeDatha yobuNtu (umzekelo, igama lakho nedilesi ye-imeyile), kwaye kufuneka unikeze igama lomsebenzisi kunye negama lokugqitha. Sisebenzisa iiNkcukacha zakho ukugcwalisa izicelo zakho zeemveliso kunye neenkonzo, ukuphucula iiNkonzo zethu, ukunxibelelana nawe amaxesha ngamaxesha, ngemvume yakho, malunga neemveliso zethu kunye neenkonzo, nanjengoko kuchazwe ngenye indlela kwesi Saziso Sabucala.
Sibhekisa ngokudibeneyo kulo lonke ulwazi esiluqokelelayo olungeyoDatha yobuNtu, kubandakanya iDatha yokuSebenzisa, idatha yabantu kunye nokuchongwa kweDatha yobuNtu, njengeDatha engeyoYakho. Ukuba sidibanisa iiNgcaciso ezingezizo ezobuNtu kunye neeNkcukacha zaBantu, siya kuyiphatha le nkcukacha idibeneyo njengeDatha yobuNtu phantsi kwesi Saziso saBucala.
Idatha yobuqu, idatha engeyiyo eyakho buqu, kunye neNgeniso yoMsebenzisi ekubhekiswa kuyo kwesi Saziso saBucala ngokudibeneyo njengoLwazi loMsebenzisi.
Unokukhetha ukungenela ukhuphiswano, i-sweepstakes, ukhuphiswano, uthathe inxaxheba kuphando, ubhalisele iincwadana zeendaba, amanqaku amanqaku, sebenzisa iibhodi zemiyalezo, amagumbi okuxoxa, iindawo zokufaka iifoto zabafundi, amanqaku omfundi kunye nokuphononongwa, gcina amanqaku okanye omnye umxholo kwiiSayithi zethu, umfundi- senze iindawo zokulayisha umxholo, uqhakamshelane nathi kunye neendawo zenkxaso yabathengi, kunye neendawo ezikuvumela ukuba ubhalisele ukuthumela imiyalezo ngeSMS kunye nezilumkiso eziphathwayo, okanye kungenjalo unxibelelane nathi ngeendlela ezifanayo (Iindawo eziHlangeneyo). Ezi ziNdawo zokuDibana zinokufuna ukuba ubonelele ngeDatha yobuNtu ehambelana nemisebenzi. Uyaqonda kwaye uyavuma ukuba iiNdawo eziHlangeneyo zizithandela, kwaye ukubonelela ngeDatha yobuqu yale misebenzi kuya kuqokelelwa kwaye kusetyenziswe kuthi ukuchonga nokunxibelelana nawe. Kwiimeko ezithile, sinokwabelana ngezo nkcukacha zobuqu kunye nabaxhasi, abathengisi, ababandakanyekayo okanye amanye amaqabane. Ukuba unemibuzo malunga neNdawo yokuNxibelelana ethile, nceda unxibelelane nathi kwaye usikhombise loo ndawo yoNxibelelwano.
Ukongeza, uyacelwa ukuba ubonelele ngeDatha yobuNtu xa ufaka isicelo somsebenzi kunye nezinto ezixhasayo. Apho ufaka khona isicelo somsebenzi egameni lomnye umntu, uyaqinisekisa ukuba umazisile loo mntu ngendlela esiqokelela, sisebenzise kwaye sabelane ngayo ngeDatha yakhe, isizathu sokuba usinikeze oko, ukuba angaqhakamshelana njani nathi, imiqathango yoku Isaziso sangasese kunye nemigaqo-nkqubo enxulumene noko kwaye bayivumile loo ngqokelela, ukusetyenziswa kunye nokwabelana. Unokukhetha nokungenisa okanye sinokuqokelela ulwazi olongezelelekileyo malunga nawe, njengolwazi lwedemokhrasi (umzekelo isini sakho, umhla wokuzalwa, okanye ikhowudi ye-zip) kunye nolwazi malunga nezinto ozikhethayo kunye nomdla wakho. Ukusilela ukubonelela ngeDatha yobuqu efunekayo kuya kusithintela ekubeni sikwazi ukubonelela ngeenkonzo ozicelayo (umzekelo, ukubhaliswa kwamalungu okanye ukungeniswa kwesicelo somsebenzi) okanye kungenjalo kuthintele ukubanakho kwethu ukubonelela ngeeNkonzo.
Nayi imizekelo yoLwazi loMsebenzisi esinokuyiqokelela:
Iinkcukacha zonxibelelwano. Siqokelela igama lakho kunye nefani yakho, idilesi yemeyile, idilesi yeposi, inombolo yefowuni, kunye nezinye iinkcukacha zonxibelelwano ezifanayo.
Iziqinisekiso. Siqokelela amagama agqithisiweyo, iingcebiso zegama eligqithisiweyo, kunye nolunye ulwazi lokuqinisekisa kunye nokufikelela kwiakhawunti.
Idatha yabantu. Siqokelela iinkcukacha zabantu kubandakanya iminyaka yakho, isini kunye nelizwe.
Idatha yokuhlawula. Siqokelela idatha eyimfuneko xa siqhubekeka nentlawulo yakho xa uthenga, kubandakanya inombolo yesixhobo sakho sentlawulo (njengenombolo yekhadi letyala), kunye nekhowudi yokhuseleko ehambelana nesixhobo sakho sentlawulo.
Idatha yeProfayili. Siqokelela igama lomsebenzisi, umdla, izinto ozithandayo kunye nenye idatha yeprofayile.
Abafowunelwa. Siqokelela idatha malunga nabantu onxibelelana nabo ukuze sizalisekise isicelo sakho, njengokugcwalisa ukubhaliswa kwesipho. Ukusebenza okunje kwenzelwe kuphela abahlali baseMelika (U.S.). Ngokusebenzisa lo msebenzi, uyavuma kwaye uyavuma ukuba wena nabafowunelwa bakho base-U.S kwaye unemvume yabafowunelwa bethu yokusebenzisa iinkcukacha zabo zonxibelelwano ukufezekisa isicelo sakho.
Umxholo. Siqokelela umxholo wemiyalezo oyithumelayo kuthi, enje ngengxelo kunye nokuphononongwa kwemveliso oyibhalayo, okanye imibuzo kunye nolwazi olunikezela kwinkxaso yabathengi. Siqokelela kwakhona umxholo wonxibelelwano lwakho njengoko kufanelekile ukukunika iinkonzo ozisebenzisayo.
Qalisa kwakhona idatha. Siqokelela idatha ukuze sikuqwalasele xa kuvulwa umsebenzi ukuba ungenisa isicelo kuthi, kubandakanya nembali yengqesho, ukubhala iisampulu kunye nezalathiso.
Idatha yoVavanyo. Sinokuphonononga iindwendwe ngezihloko ezahlukeneyo, kubandakanya iminyhadala kunye namava, ukhetho lokusetyenziswa kwemithombo yeendaba kunye nendlela esinokuthi siziphucule ngayo iiSayithi kunye neenkonzo zethu. Impendulo kuphando lwethu ngokuzithandela ngokupheleleyo.
Ukuthumela esidlangalaleni. Siqokelela ulwazi xa ufaka into eza kuboniswa kwiiSayithi zethu. Nalo naluphi na unxibelelwano olungenisayo okanye olunokuposwa kwindawo ekubonakala kuyo iiSayithi zethu, ezinje ngezimvo kwinqaku okanye uphononongo, lunxibelelwano lwasesidlangalaleni kwaye lunokujongwa luluntu ngokubanzi. Ke ngoko, uyavuma kwaye uyayiqonda into yokuba awulindelanga bucala okanye imfihlo kumxholo owungenisayo kwiindawo ezinjalo ngeeSayithi zethu, nokuba ungenise okanye ungafakwanga ulwazi lwakho. Oku kungeniswa kuya kubandakanya ukubhaliswa kweleta yeendaba kunye nayo nayiphi na indawo yendawo yethu efuna ukungena okanye ubhaliso ngaphambi kokusetyenziswa. Ukuba nangaliphi na ixesha ubonakalisa iinkcukacha zakho nakuluphi na unxibelelwano olungeniswe kwezi ndawo, abanye abantu banokuqokelela basebenzise iinkcukacha zakho. Asinaxanduva loku, kwaye asinakuqinisekisa ngokhuseleko lwalo naluphi na ulwazi lomntu oluchazayo kunxibelelwano olungeniswe kwezi ndawo zokuthumela okanye eziqulethwe kwi-imeyile okanye olunye unxibelelwano olungeniswe kuthi, kwaye ke, uyavuma ukuba uxela iinkcukacha zakho nakweyiphi na into enjalo, uyenza ngokuzibeka emngciphekweni.
Sinokongeza ulwazi esiluqokelela kunye neerekhodi zangaphandle ukuze sifunde ngakumbi malunga nabasebenzisi bethu, ukuze senze umxholo kunye nokunikezelwa esikubonisayo, kunye nezinye iinjongo. Singafumana olu lwazi malunga nawe kwimithombo yoluntu okanye kubantu besithathu, kubandakanya ngaphandle komda abathengisi beenkcukacha zabathengi, iinethiwekhi zentlalo, kunye nabathengisi ababonisa isikhalazo sokuqokelela kunye nemithetho esebenzayo yabucala. Singadibanisa ulwazi esilufumanayo kweminye imithombo yolwazi esiyiqokelele kwiiNkonzo. Kwezo meko, siya kufaka esi Saziso saNgasese kulwazi oludibeneyo.
Sisebenzisa ulwazi esiluqokelelayo, kubandakanya idatha yobuNtu kunye neDatha yokuSebenzisa:
ukwenza ukuba ukwazi ukusebenzisa iiNkonzo zethu, ukwenza iakhawunti okanye iprofayili, ukuqhubekeka ulwazi olunikezela ngeeNkonzo zethu (kubandakanya nokuqinisekisa ukuba idilesi yemeyile yakho iyasebenza kwaye iyasebenza) nokwenza iinkqubo zakho;
ukubonelela ngenkonzo yabathengi enononophelo kunye nokhathalelo, kubandakanya ukuphendula imibuzo yakho, izikhalazo, okanye izimvo kunye nokuthumela uphando kunye neempendulo zokwenza uphando;
ukukunika ulwazi, iimveliso, okanye iinkonzo ozicelileyo;
Ukubonelela ngomyalezo obhaliweyo weSMS ngeenjongo ezithile;
ukunikezela nge-imeyile eli nqaku livumela iindwendwe ukuba zithumele i-imeyile kwikhonkco komnye umntu ukuze zibazise malunga nenqaku okanye inqaku kwiiSayithi. Asizigcini iinombolo zomnxeba okanye iidilesi ze-imeyile eziqokelelwe kwezi njongo emva kokuthumela umyalezo obhaliweyo weSMS okanye i-imeyile;
ukwamkela nokwenza izicelo zomsebenzi kunye nathi;
ukukunika ulwazi, iimveliso, okanye iinkonzo esikholelwa ukuba ziya kuba nomdla kuwe, kubandakanya namathuba awodwa kuthi nakumaqabane ethu;
ukulungelelanisa umxholo, iingcebiso, kunye nentengiso thina nabantu besithathu esikubonisayo kuwe, zombini kwiiNkonzo nakwezinye iindawo ezikwi-intanethi;
ngeenjongo zeshishini zangaphakathi, njengokuphucula iiNkonzo kunye nomxholo;
ukulawula nokuqhuba ukhuphiswano, i-sweepstakes, unyuselo, iinkomfa kunye nemisitho ekhethekileyo (ngokudibeneyo Imicimbi). Ulwazi oluqokelelwe kwiiSayithi zethu ngokudibeneyo nezi ziganeko zikwasetyenziselwa ukuthengisa iimveliso ezongezelelweyo, iinkonzo kunye neminyhadala kuthi kunye / okanye ngabathengisi bethu, abaxhasi, kunye namaqabane ethu okuthengisa. Nceda ubone imigaqo yesiganeko ngasinye kunye nayo nayiphi na imigaqo-nkqubo yabucala yezeMisitho yolwazi olongezelelekileyo kukhetho onokulwenza ngokubhekisele ekusebenziseni ulwazi lwakho lomntu oluqokelelwe ngokunxulumene nalo msitho. Ukuya kuthi ga apho kukho ukungqubana phakathi kwesi Saziso saBucala kunye nemigaqo okanye imigaqo-nkqubo esebenzayo kuMnyhadala, imigaqo-nkqubo kunye nemigaqo-nkqubo enxulumene noMsitho iya kulawula .;
ukunxibelelana nawe ngonxibelelwano lolawulo kwaye, ngokokubona kwethu, utshintsho kwiSaziso saBucala, iMigaqo yokuSebenzisa, okanye nayiphi na eminye imigaqo-nkqubo yethu;
ukuthobela imimiselo noxanduva olusemthethweni; kwaye
ngeenjongo njengoko zichaziwe ngexesha onikezela ngalo ngolwazi lwakho kwaye njengoko kuchaziwe kwesi Saziso Sobumfihlo.
Iinkonzo ziqulathe ukudityaniswa konxibelelwano lwasentlalweni kunye namanye amaqonga apho ulwazi kwabelwana ngalo phakathi kwethu kunye neqonga elinje. Umzekelo, ukuba wenza okanye ungena kwiakhawunti yakho usebenzisa indawo yemidiya yoluntu yeqela lesithathu, sinokufikelela kulwazi oluthile olukule ndawo, njengegama lakho, idilesi ye-imeyile, ulwazi lweakhawunti, iifoto kunye noluhlu lwabahlobo, kunye nolunye ulwazi ngokungqinelana neenkqubo zokugunyaziswa ezimiselwe lelo sayithi yemidiya yoluntu. Ukuba awufuni inethiwekhi yokuncokola ukuqokelela ulwazi malunga nawe njengoko kuchaziwe apha ngasentla, okanye awufuni ukuba inethiwekhi yokuncokola ibelane nathi, nceda uphonononge umgaqo-nkqubo wabucala, useto lwabucala kunye nemiyalelo yenethiwekhi esebenzayo ngaphambili undwendwela kwaye usebenzisa iiNkonzo zethu.
Ukuziqhelanisa nokwabelana ngolwazi
Sabelana ngeDatha engeyiyo eyakho, kubandakanya iDatha yokuSebenzisa, iiDatha zoBuntu ezichongiweyo kunye neenkcukacha zomsebenzisi ezihlanganisiweyo, nabantu besithathu ngokubona kwethu. Ulwazi oluqokelelwe ngeeSayithi kwabelwana ngalo kumanyano lwethu. Umzekelo, sinokwabelana ngolwazi lwakho nezinto zethu ezinxulumene noko kubandakanya nabazali kunye neenkampani zodade ngenkxaso yabathengi, ukuthengisa kunye nokusebenza kobugcisa. Sabelana ngeNkcukacha zoMsebenzisi, kubandakanya neDatha yobuNtu, njengoko kuchaziwe ngenye indlela kulo Mgaqo-nkqubo, naphantsi kwezi meko zilandelayo.
Amaxesha ngamaxesha, singena kubudlelwane nabantu besithathu abasibonelela ngeenkonzo (umzekelo, uhlalutyo kunye neenkampani zophando, abathengisi kunye neearhente zentengiso, ulawulo lwedatha kunye neenkonzo zokugcina, iinkonzo zekhadi lokuthenga ngetyala, abaququzeleli bokuthengisa izinto, i-sweepstakes okanye ibhaso lomncintiswano ukuzaliseka). Sabelana ngolwazi lwakho nomntu wesithathu ngeenjongo zokuququzelela izicelo zakho (njengaxa ukhetha ukwabelana ngolwazi kunye nenethiwekhi yoluntu malunga nezinto ozenzayo kwiiSayithi) kunye nokunxibelelana nentengiso, ukulinganisa kunye nokuphucula iiSayithi zethu kunye nokusebenza ngokukuko kwentengiso, kunye nezinye izinto ezincedayo. Sabelana ngolwazi oluhlangeneyo malunga neendwendwe zethu kunye nabathengisi bethu, abaxhasi, kunye namaqabane okwazisa, njengabantu abangaphi abantu abatyelele iphepha elithile okanye umsebenzi, iminyaka yobudala yeendwendwe zethu kwiSiza (okanye) kwiphepha (okanye), okanye ukuthanda nokungathandwa ngabatyeleli bethu, kodwa olu lwazi aluchazwanga ngqo kuye nawuphi na undwendwe. Sifumana ulwazi lwejografi olufana nokudityaniswa kwekhowudi kweminye imithombo, kodwa olu lwazi ludibeneyo aluyi kutyhila indawo echanekileyo yendwendwe ethile. Sikwafumana nolunye ulwazi kubemi besithathu ukuphucula iimveliso zethu kunye neenkonzo, ngeenjongo zokuthengisa okanye ukubonisa intengiso efanelekileyo. Kwezo meko, sichaza uLwazi loMsebenzisi ukuze abo baboneleli ngeenkonzo benze ezo nkonzo. Aba baboneleli ngeenkonzo bavunyelwe kuphela ukuba basebenzise iiNkcukacha zakho zobuqu ukuya kuthi ga kwinqanaba elifunekayo ukubenza bakwazi ukubonelela ngeenkonzo zabo kuthi. Bayacelwa ukuba balandele imiyalelo yethu ecacileyo nokuthobela amanyathelo okhuseleko afanelekileyo okukhusela iiNkcukacha zakho. Kwaye iisayithi zethu zisebenzisa uhlalutyo oluthile lukaGoogle kunye nezinye iinkonzo, kwaye amaphepha athile asebenzisa i-Google AMP Client ID API, nganye nganye eyenza ukuqokelelwa nokwabelana ngolwazi lwakho (kubandakanya neDatha yobuNtu) noGoogle ukuze iphinde isetyenziswe. Ngolwazi oluthile kusetyenziso lukaGoogle kunye nendlela yokuyilawula, nceda ubone ukuba uGoogle uyisebenzisa njani idatha xa usebenzisa iisayithi zamaqabane ethu okanye iiapps kunye neSaziso seMfihlo sikaGoogle.
Ukulungiselela kwakho, sinokubonelela ngethuba lokuthenga iimpahla ezithile, ukuthengisa kunye neenkonzo kwiiSayithi (kubandakanya, ngaphandle komda, ukuthengwa kweentengiso, ukuprinta kunye nokubhaliswa kwamaphephancwadi kwidijithali kunye namatikiti emisitho ekhethekileyo). Iinkampani ngaphandle kweBill Simmons Media Group, abazali bayo, amaqabane, amahlakani okanye iinkxaso-mali zinokuqhubekeka nokwenza ezi ntengiselwano. Sibiza ezi nkampani ziqhuba imisebenzi yethu ye-e-commerce, uku-odola kunye nokuzaliseka kukhuphiswano kunye / okanye nabanikezeli beenkonzo zokusebenza. Ngabantu besithathu abenza iinkonzo egameni lethu. Ukuba ukhetha ukusebenzisa ezi nkonzo zinganyanzelekanga, ababoneleli bethu bokusebenza baya kucela ulwazi lwakho lomntu ukuzalisa iodolo okanye isicelo sakho. Ukungeniswa ngokuzithandela kwenkcazelo yakho yobuqu kwaba banikezeli bokusebenza, kubandakanya iodolo yakho okanye isicelo, kuya kulawulwa yimigaqo yokusetyenziswa kunye nemigaqo-nkqubo yabucala yomnikezeli. Ukuququzelela iodolo okanye isicelo esivela kuwe, sinokwabelana ngeenkcukacha zakho kunye nomboneleli. Umboneleli osebenzayo unokwabelana ngolwazi lwakho kunye nolwazi malunga nezinto ozithengileyo kuthi. Sinokugcina olu lwazi kwiziko ledatha lethu lobulungu. Kwiimeko ezininzi, sicela ukuba ababoneleli bethu bokusebenza babambelele kumalungiselelo eSaziso saBucala kwaye abo baboneleli babelana kuphela ngolwazi lomntu siqu lwabakhenkethi nathi, ngaphandle kokuba kukho imfuneko yokugcwalisa isicelo somntu otyeleleyo okanye iodolo. Ababoneleli bokusebenza bavunyelwe kuphela ukusebenzisa nayiphi na ingcaciso yobuqu ngenjongo yokuthengisa okanye ukufezekisa inkonzo oyicelayo okanye iodolo. Nangona kunjalo, kuya kufuneka ufunde umgaqo-nkqubo wabucala womnikezeli osebenzayo ukumisela ubungakanani bokusetyenziswa kunye nokuvezwa kolwazi lwakho lobuqu oluqokelelwe kwi-intanethi. Asinaxanduva lokuqokelela, ukusetyenziswa kunye nokuziveza kwezenzo zabanikezeli bokusebenza, kwaye asinaxanduva okanye sinoxanduva ngeenkonzo zabo.
Iminyhadala yethu kunye nokwenyuswa kunokulawulwa ngokudibeneyo, kuxhaswe okanye kubonelelwe ngabantu besithathu. Ukuba ukhetha ngokuzithandela ukungena okanye ukuya kumnyhadala, singabelana ngolwazi lwakho nabantu besithathu njengoko kubekiwe kwimithetho esemthethweni elawula uMnyhadala kunye neenjongo zolawulo nanjengoko kufunwa ngumthetho (umzekelo, kuluhlu lwabaphumeleleyo). Ngokungenela ukhuphiswano okanye umcimbi we-sweepstakes, uyavuma imigaqo esemthethweni elawula lo Msitho, kwaye, ngaphandle kwalapho kungavunyelwa ngumthetho osebenzayo, vumela umxhasi kunye / okanye amanye amaqela asebenzise igama lakho, ilizwi kunye / okanye ukufana kwintengiso okanye izinto zokuthengisa. Eminye iminyhadala inokulawulwa ngokupheleleyo ngumntu wesithathu kwaye iya kulawulwa yiyo nayiphi na imigaqo okanye imigaqo eyinikelayo kulomsitho kwaye luxanduva lwakho ukuphonononga nokuthobela loo migaqo.
Ukuthengisa ngokuthe ngqo kwiqela lesithathu
Singabelana ngolwazi lwakho nabantu besithathu ngeenjongo zokuthengisa ngokuthe ngqo (umzekelo, ukuqhuma kwe-imeyile, izibonelelo ezizodwa, izaphulelo, njl. Ukuba awukhethanga ukuba sabelane ngolwazi lwakho nomntu wesithathu ngeenjongo zokuthengisa, sinokwabelana ngolwazi lwakho (kubandakanya neDatha yobuqu) nabantu besithathu ngeenjongo zabo zokuthengisa ngokuthe ngqo. Nceda uqaphele, imiyalezo ethunyelwe kumntu wesithathu iya kukubeka kumgaqo-nkqubo wabucala weqela lesithathu. Sisenokutshatisa idilesi yemeyile yakho nabantu besithathu kwaye sisebenzise umdlalo onjalo ukuhambisa unikezelo ngokwesiko okanye nge-imeyile kuwe kwiiNkonzo nangaphandle kweeNkonzo.
Iimpawu zeQela lesithathu
Sinokukuvumela ukuba uqhagamshele iiSayithi zethu kwinkonzo yomntu wesithathu okanye unikezele ngeeSayithi zethu ngenkonzo yomntu wesithathu (Iimpawu zeQela lesithathu). Ukuba usebenzisa iNqaku leQela lesiThathu, sobabini kunye nomnye umntu ochaphazelekayo sinokufikelela kwaye sisebenzise ulwazi olunxulumene nokusebenzisa kwakho isiQinisekiso seQela lesiThathu, kwaye kuya kufuneka ujonge ngononophelo umgaqo-nkqubo wabucala weqela lesithathu kunye nemigaqo yokusetyenziswa. Eminye imizekelo yeeMpawu zeQela lesithathu ibandakanya oku kulandelayo:
Ukungena-ungene. Unokukhetha ukungena, wenze iakhawunti okanye ukhulise iprofayile yakho kwiiSayithi ngenkqubo yokuNgena kuFacebook. Ngokwenza oku, ucela u-Facebook ukuba asithumelele ulwazi oluthile kwiprofayile yakho ye-Facebook, kwaye uyasigunyazisa ukuba siqokelele, sigcine, kwaye sisebenzise ngokungqinelana nesi Saziso Sobumfihlo naluphi na ulwazi olunokufumaneka kuthi nge-Facebook interface.
Amaphepha eBrand. Sinikezela umxholo wethu kumanethiwekhi asekuhlaleni afana ne-Facebook, Twitter kunye ne-Instagram. Naluphi na ulwazi osinike lona xa ubandakanyeka nomxholo wethu (njengakwiphepha lethu lophawu) luphathwa ngokungqinelana nesi Saziso Sobumfihlo. Kwakhona, ukuba ubhengeza esidlangalaleni iiSayithi zethu kwinkonzo yomntu wesithathu (umzekelo, ngokusebenzisa i-hashtag enxulumene nathi kwi-tweet okanye ngeposi), sinokusebenzisa ireferensi yakho okanye ngokunxulumene neNkonzo yethu.
Kwimeko apho sihamba ngotshintsho lweshishini (njengokudibana, ukufunyanwa yenye inkampani, ukubhengezwa, okanye ukuthengiswa kwayo yonke into okanye isahlulo sempahla yethu, kubandakanya, ngaphandle komda, ngexesha layo nayiphi na inkqubo yenkuthalo efanelekileyo), ubuqu bakho Idatha iya kuba phakathi kweeasethi ezigqithisiweyo. Ngokubonelela ngeDatha yakho yobuqu, uyavuma ukuba singadlulisa olo lwazi kwezo meko ngaphandle kwemvume yakho engaphezulu. Ukuba olo tshintsho lwenzeka, siya kwenza iinzame ezifanelekileyo zokucela ukuba umnini omtsha okanye iqumrhu elidibeneyo (njengoko kufanelekile) lilandele esi Saziso saBucala ngokubhekisele kwiiNkcukacha zakho. Ukuba idatha yakho yobuqu inokusetyenziswa ngokuchasene nesi Saziso Sobumfihlo, siya kucela ukuba ufumane isaziso kwangaphambili.
Olunye udaba lokuchazwa
Sinelungelo, kwaye ke usigunyazisa ngokucacileyo, ukuba sabelane ngeeNkcukacha zoMsebenzisi: (i) ukuphendula isupina, imiyalelo yenkundla, okanye inkqubo yezomthetho, okanye ukuseka, ukukhusela, okanye ukusebenzisa amalungelo ethu asemthethweni okanye ukuzithethelela kumabango asemthethweni; (ii) ukuba sikholelwa ekubeni kunyanzelekile ukuba siphande, sithintele, okanye sithathe amanyathelo ngokubhekisele kwizenzo ezingekho mthethweni, ubuqhetseba, okanye iimeko ezichaphazela ukoyikiswa kwakhe nawuphina umntu okanye ipropathi; (iii) ukuba sikholelwa ekubeni kunyanzelekile ukuba siphande, sithintele, okanye sithathe amanyathelo ngokubhekisele ekuphatheni gadalala kwezibonelelo zeenkonzo okanye i-Intanethi ngokubanzi (njengokugaxana okukhulu, ukungavumi ukuhlaselwa, okanye ukuzama ukubekekisa ulwazi); (iv) ukukhusela amalungelo ethu asemthethweni okanye ipropathi, iinkonzo zethu okanye abasebenzisi babo, okanye naliphi na elinye iqela, nokukhusela impilo kunye nokhuseleko lwabasebenzisi bethu okanye uluntu ngokubanzi; kunye (v) nakwinkampani yethu engumzali, iinkxaso-mali, amashishini amanyeneyo, okanye ezinye iinkampani eziphantsi kolawulo olufanayo nathi (kwimeko leyo siya kufuna ukuba ezo zinto zisinike imbeko kwesi Saziso Sobumfihlo).
Xa sisebenzisa igama elithi idatha engaziwayo, sibhekisa kwidatha kunye nolwazi olungakuvumeli ukuba uchongwe okanye uchongwe, nokuba uwedwa okanye xa udityaniswe nolunye ulwazi olufumanekayo kumntu wesithathu. Singenza idatha engaziwayo kwiDatha yobuqu esiyifumana ngawe kunye nabanye abantu esibaqokelela iiNkcukacha zaBucala. Idatha engaziwayo iya kubandakanya ulwazi lohlalutyo kunye nolwazi oluqokelelwe sithi sisebenzisa ikuki. Senza iiNkcukacha zaBantu ukuba zibe yidatha engaziwayo ngokungafaki ulwazi (njengegama lakho okanye ezinye izinto ezichazayo) ezenza ukuba idatha ibonakale kuwe. Sisebenzisa le datha ingaziwayo ukuhlalutya iipatheni zokusetyenziswa ukuze senze inkqubela kwiiNkonzo zethu.
Ukuba uchonga naluphi na uLwazi loMsebenzisi njengoluntu, usigunyazisa ukuba sabelane ngolwazi olunjalo esidlangalaleni. Umzekelo, unokukhetha ukwenza ukuThunyelwa kwakho koMsebenzisi (njengegama lakho, i-bio, i-imeyile okanye iifoto) ezifumanekayo esidlangalaleni. Kwakhona, kukho iindawo zeNkonzo (umzekelo, iibhodi zemiyalezo, amagumbi okuxoxa, kunye nezinye iiforamu ezikwi-intanethi) apho ukwazi ukuthumela khona ulwazi oluzakufumaneka ngokuzenzekelayo kubo bonke abanye abasebenzisi beNkonzo. Ngokukhetha ukusebenzisa le mimandla, uyaqonda kwaye uyavuma ukuba nabani na angafikelela, asebenzise, ​​kwaye abhengeze naluphi na ulwazi oluthumela kwezo ndawo.
Iinkonzo zenziwa eMelika. Ukuba ukwelinye igunya, nceda wazi ukuba ulwazi osinika lona luya kudluliselwa, ligcinwe kwaye lisetyenzwe eMelika. Ngokusebenzisa iiNkonzo okanye ukusinika naluphi na ulwazi, uyavuma kolu tshintsho, ukuqhubekekiswa, kunye nokugcinwa kolwazi lwakho eUnited States, indawo apho imithetho yabucala ingaqukanga njengaleyo uhlala kuyo okanye ilizwe ohlala kulo. ummi ofana ne-European Union. Uyaqonda ukuba urhulumente wase-U.S. Angafumana ukufikelela kwiDatha yobuqu oyingenisayo xa kukho imfuneko yokwenza uphando (umzekelo, uphando lobunqolobi). Siza kuthatha onke amanyathelo afanelekileyo ukuqinisekisa ukuba idatha yakho iphathwa ngokukhuselekileyo nangokuhambelana nesi Saziso Sobumfihlo. Sisebenzisa izikhuselo ezifanelekileyo ezifanelekileyo ezifanelekileyo zokudlulisa iiNkcukacha zakho zobuqu e-U.S. (Umzekelo, imiqathango esemgangathweni yesivumelwano ekhutshwe yiKhomishini yaseYurophu, enokufikelela kuyo Apha ).
Olu bhengezo longezelelekileyo kubahlali baseCalifornia lusebenza kuphela kubantu abahlala eCalifornia. Umthetho wabucala wabathengi waseCalifornia ka-2018 (CCPA) ubonelela ngamalungelo ongezelelweyo okwazi, ukucima kunye nokukhetha ukuphuma, kwaye ufuna ukuba amashishini aqokelele okanye abhengeze ulwazi lomntu ukubonelela ngezaziso kunye neendlela zokwenza loo malungelo. Amagama asetyenziswe kweli candelo aneentsingiselo azinikiweyo kwiCCPA, ezinokuthi zibe banzi kunentsingiselo yazo efanayo. Umzekelo, inkcazo yolwazi lomntu siqu phantsi kweCCPA ibandakanya igama lakho, kodwa kunye nolwazi ngokubanzi ngokubanzi njengobudala.
Nangona ulwazi esiluqokelelayo luchazwe ngokubanzi kumaCandelo 1-6 apha ngasentla, iindidi zolwazi lomntu esingaqokelela-njengoko kuchaziwe yi-CCPA- kwiinyanga ezili-12 ezidlulileyo zezi:
Izazisi, kubandakanya igama, idilesi ye-imeyile, inombolo yeakhawunti yefowuni, idilesi ye-IP, kunye ne-ID okanye inombolo eyabelwe iakhawunti yakho.
Iirekhodi zabaThengi, ukuhlawula kunye nedilesi yokuthumela, kunye nolwazi lwekhredithi okanye ikhadi lekhadi.
Inani labantu, njengobudala bakho okanye isini. Eli candelo libandakanya idatha enokufumana ulwahlulo olukhuselweyo phantsi kweminye imithetho yaseCalifornia okanye yomanyano.
Ulwazi lwentengiso, kubandakanya ukuthengwa kunye nokuzibandakanya neeNkonzo.
Umsebenzi we-Intanethi, kubandakanya unxibelelwano lwakho neNkonzo yethu.
Idatha evakalayo okanye ebonakalayo, kubandakanya imifanekiso okanye iividiyo ozibhala kwiNkonzo yethu.
Idatha yendawo yokuhlala, kubandakanya indawo enikwe iinkonzo ezinje ngeWiFi kunye neGPS.
Idatha yengqesho kunye nemfundo, kubandakanya ulwazi olunikezelayo xa ufaka isicelo somsebenzi nathi.
Uqikelelo, kubandakanya ulwazi malunga nomdla wakho, ukhetho kunye nezinto ozithandayo.
Ngolwazi oluthe kratya malunga neendlela zethu zokuqokelela, kubandakanya imithombo yolwazi esifumana kuyo ulwazi, nceda uphonononge iindlela ezahlukeneyo zolwazi oluqokelelwe ngeendlela ezahlukeneyo njengoko kuchaziwe ngokubanzi kwiCandelo 1 - 6 apha ngasentla. Siqokelela kwaye sisebenzise ezi ndidi zolwazi lomntu kwiinjongo zeshishini ezichazwe kwiCandelo 1 - 6, kunye neendlela zethu zokwabelana ezichazwe kwiCandelo 7.
Asithengisi ngokubanzi ulwazi lomntu siqu njengoko igama elithi ukuthengisa liqondwa ngokwesiko. Nangona kunjalo, ukuya kuthi ga kwintengiso phantsi kweCCPA kutolikwa ukuba kubandakanya imisebenzi yetekhnoloji yentengiso enje ngezo zichazwe kwintengiso (Icandelo le-13) njengentengiso, sikunika ithuba lokucela ukuba singazithengisi iinkcukacha zakho. Asizithengisi iinkcukacha zabantwana abaziwayo ukuba bangaphantsi kweminyaka eli-16 ngaphandle kwemvume yokuvuma.
Sithengisa okanye sichaze ezi ndidi zilandelayo zolwazi lomntu ngeenjongo zorhwebo: izazisi, ulwazi lwedemokhrasi, ulwazi lwentengiso, umsebenzi we-intanethi, idatha yendawo kunye nolwazelelo. Sisebenzisa kunye neqabane lethu ngeendlela ezahlukeneyo ukunceda ekusebenzeni kwethu kwemihla ngemihla kunye nokulawula iNkonzo yethu. Nceda uphonononge iZenzo zethu zokwabelana ngolwazi kwiCandelo lesi-7 apha ngasentla, ukuthengisa kwiCandelo lesi-7 apha ngezantsi, kunye neMigaqo-nkqubo yethu yeeKuki kunye noMgaqo-nkqubo weTekhnoloji yokuKhangela ngolwazi oluthe kratya malunga namaqela esabelana ngolwazi nawo.
Ilungelo lokwazi nokucima
Ukuba ungumhlali waseCalifornia, unelungelo lokucima ulwazi lomntu siqu esiluqokelele kuwe kunye nelungelo lokwazi ulwazi oluthile malunga neendlela zethu zedatha kwiinyanga ezili-12 ezidlulileyo. Ngokukodwa, unelungelo lokucela oku kulandelayo kuthi:
Iindidi zolwazi lomntu siqu esiziqokelele ngawe;
Iindidi zemithombo yolwazi apho ulwazi lomntu luqokelelwe khona;
Iindidi zolwazi lomntu siqu malunga nawe sizichazile ngenjongo yeshishini okanye esithengisiweyo;
Iindidi zabantu besithathu ekuxelwe kubo ulwazi lomntu ngeenjongo zeshishini okanye ukuthengiswa;
Ishishini okanye injongo yorhwebo yokuqokelela okanye ukuthengisa ulwazi ngawe; kwaye
Iziqwenga ezithile zolwazi lomntu siqu esiziqokelele ngawe.
Ukuze usebenzise naliphi na kula malungelo, nceda uthumele isicelo ngefom yethu ekwi-intanethi okanye usithumelele i-imeyile apha voa_co @ .com . Kwisicelo, nceda ucacise ukuba leliphi ilungelo ofuna ukulisebenzisa kunye nobungakanani besicelo. Siza kukuqinisekisa ukufumana kwakho isicelo kwisithuba seentsuku ezili-10.
Sinoxanduva lokuba ngumnini wolwazi oluthile lokuqinisekisa isazisi sakho xa sisenza isicelo sokwazi okanye ukucima iinkcukacha zakho kunye nokuqinisekisa ukuba ukusasazwa kwaloo ngcaciso akuyi kukwenzakalisa xa kusiwa komnye umntu. Ukuqinisekisa isazisi sakho, siyakucela kwaye siqokelele iinkcukacha ezongezelelweyo zobuqu kuwe ukuzithelekisa neerekhodi zethu. Singacela ulwazi olongezelelekileyo okanye amaxwebhu ukuba ngaba sibona kufanelekile ukuqinisekisa ubungqina bakho kunye nenqanaba elifanelekileyo lokuqiniseka. Sinokunxibelelana nawe nge-imeyile, iziko lomyalezo elikhuselekileyo, okanye ezinye iindlela ezifanelekileyo ezifanelekileyo nezifanelekileyo. Sinelungelo lokwala izicelo phantsi kweemeko ezithile. Kwiimeko ezinjalo, siya kukwazisa ngezizathu zokwala. Asizukubonelela ngamaqhekeza athile olwazi ngawe ukuba ukubhengeza oko kudala umngcipheko omkhulu, ocacileyo, kwaye onobungozi ekukhuseleni olo lwazi lomntu, iakhawunti yakho nathi, okanye ukhuseleko lweenkqubo zethu okanye uthungelwano. Akukho mcimbi esiya kuthi sichaze, ukuba siyithathile, inombolo yakho yoKhuseleko lweNtlalo, inombolo yelayisensi yokuqhuba okanye enye inombolo yesazisi ekhutshwe ngurhulumente, inombolo yeakhawunti yezemali, nayiphi na i-inshurensi yezempilo okanye inombolo yesazisi yezonyango, iphasiwedi yeakhawunti, okanye imibuzo yezokhuseleko kunye neempendulo .
Ukuya kuthi sithengise ulwazi lwakho lomntu njengoko igama lithengiswa phantsi komThetho wabucala wabathengi waseCalifornia, unelungelo lokuphuma kwintengiso yolwazi lwakho lobuqu kuthi kubantu besithathu nangaliphi na ixesha. Ungangenisa isicelo sokukhetha ukuphuma ngokuklikha i-Do Not Sell My Information. Ungasingenisa isicelo sokukhetha ukuphuma ngokuthumela i-imeyile ku voa_co @ .com .
Ungasingenisa isicelo usebenzisa iarhente echongiweyo. Kuya kufuneka uyalele iarhente ukuba bayakufuna ukuxela ukuba bakwenzela wena xa besenza isicelo, banamaxwebhu afanelekileyo, kwaye bazilungiselele ukubonelela ngolwazi lomntu siqu oluyimfuneko ukukuchonga kuvimba wethu.
Unelungelo lokungafumani mpatho ucalulayo ekusebenziseni naliphi na ilungelo lakho.
Inkuthazo yemali ziinkqubo, izibonelelo, okanye eminye iminikelo, kubandakanya iintlawulo kubathengi njengembuyekezo, yokuxela, ukucima, okanye ukuthengisa ulwazi ngawe malunga nabo.
Sinokubonelela ngamaxabiso ezaphulelo kubathengi ababhalisela ukuba kuluhlu lwethu lokuposa okanye bajoyine iinkqubo zethu zokunyaniseka. Ezo nkqubo ziya kuba nemigaqo eyongezelelweyo efuna uphononongo kunye nemvumelwano. Nceda uphonononge loo magama ngeenkcukacha zale nkqubo, indlela yokurhoxisa okanye ukucima, okanye ukubanga amalungelo akho ngokuthe ngqo kwezi nkqubo.
Ngokuqhelekileyo asibaphathi abathengi ngokwahlukileyo ukuba basebenzise ilungelo labo phantsi komthetho waseCalifornia. Nangona kunjalo, kwiimeko ezithile, amaxabiso esaphulelo aya kufuna ukuba ubekhona kuluhlu lwethu lokuposa okanye ilungu lenkqubo yethu yokunyaniseka. Kwiimeko ezinjalo, sinokunika umahluko wexabiso kuba ixabiso lihambelana ngokufanelekileyo nexabiso ledatha yakho. Ixabiso ledatha yakho liya kuchazwa ngokwemiqathango yeenkqubo zokukhuthaza.
Umthetho waseCalifornia Shine the Light uvumela abathengi baseCalifornia ukuba bacele iinkcukacha ezithile malunga nokuba iintlobo ezithile zolwazi lwabo kwabelwana ngazo nabantu besithathu kwaye, kwezinye iimeko, abaxhasi, kwabo bantu bangaphandle kunye neenjongo zokuthengisa ngokuthe ngqo. Ngaphantsi komthetho, ishishini kufuneka libonelele abathengi baseCalifornia ngolwazi oluthile xa becela okanye bavumela abathengi baseCalifornia ukuba baphume kolu hlobo lokwabelana.
Ukuzilolonga ngokuKhanya kwesicelo sokuKhanya, nceda unxibelelane nathi apha voa_co @ .com okanye iBill Simmons Media Group c / o ISebe lezomthetho, 438 N Gower St, Los Angeles, CA 90028. Kuya kufuneka ubeke ingxelo yamaLungelo oBucala beCalifornia emzimbeni wesicelo sakho, kunye negama lakho, idilesi yesitalato, isixeko, ilizwe , kunye nekhowudi ye-zip. Kumzimba wesicelo sakho, nceda usinike ulwazi olwaneleyo ukuze sikwazi ukubona ukuba oku kuyasebenza kuwe. Nceda uqaphele ukuba asiyi kwamkela imibuzo ngefowuni, i-imeyile, okanye ngefeksi, kwaye asinaxanduva lezaziso ezingabhalwanga okanye zithunyelwe ngokufanelekileyo, okanye ezingenalo ulwazi olupheleleyo.
Ulwazi olubalulekileyo kubahlali baseNevada-amalungelo akho abucala eNevada
Ukuba ungumhlali waseNevada, unelungelo lokukhetha ukuphuma kwintengiso yeDatha yobuNtu kubantu besithathu abanenjongo zokufumana ilayisensi okanye ukuthengisa loo datha. Ungalisebenzisa eli lungelo ngokunxibelelana nathi apha okanye usithumelele i-imeyile apha voa_co @ .com ngomgca wesifundo iNevada Musa ukuThengisa isicelo kwaye usinike igama lakho kunye nedilesi ye-imeyile enxulumene neakhawunti yakho.
Izikhangeli ze-Intanethi zinokuqwalaselwa ukuba zingathumeli mkhondo kwiimpawu ezikwi-intanethi ozindwendwelayo. Ikhowudi yaseCalifornia yeShishini kunye nezoBuchule Icandelo lama-22575 (b) (njengoko lenziwe izilungiso ngoJanuwari 1, 2014) ibonelela ukuba abahlali baseCalifornia banelungelo lokwazi ukuba iBill Simmons Media Group iphendula njani ku ungazilandeli izicwangciso zebrawuza.
Okwangoku akukho mvumelwano phakathi kwabathathi-nxaxheba kumzi mveliso malunga nokuba ungalandeleli ntoni kule meko. Ke ngoko, njengeewebhusayithi ezininzi kunye neenkonzo ze-Intanethi, iiNkonzo azitshintshi iindlela zabo xa befumana uphawu lokungalandeli umkhondo kwisikhangeli somtyeleli. Ukufumana ngakumbi malunga Musa ukuKhangela, nceda undwendwele Apha .
Sisebenzisa ezinye iinkampani phantsi kwezivumelwano nathi ukuhambisa iintengiso zomntu wesithathu xa undwendwela kwaye usebenzisa iiNkonzo. Ezi nkampani ziqokelela kwaye zisebenzise ulwazi lokucofa, uhlobo lwesikhangeli, ixesha kunye nomhla, umxholo wentengiso ucofiwe okanye ukrwelelwe xa undwendwela iiNkonzo kunye nezinye iiWebhusayithi ukuze unikezele ngentengiso malunga neempahla kunye neenkonzo ezinokubangela umdla kuwe. . Ezi nkampani zihlala zisebenzisa itekhnoloji yokulandela umkhondo ukuqokelela olu lwazi. Ezinye iinkampani 'ezisebenzisa ubuchwepheshe bazo bokulandela umkhondo zixhomekeke kwimigaqo-nkqubo yazo yabucala, hayi le. Ukongeza, sabelana nala maqela esithathu nayiphi na inkcukacha yobuqu osinika yona ngokuzithandela, njengedilesi ye-imeyile, ukuphendula intengiso okanye ikhonkco lomxholo oxhasiweyo.
Intengiso ekujoliswe kuyo
Ukulungiselela ukuhambisa izithembiso kunye nentengiso enokuba nomdla kubasebenzisi bethu, sibonisa iintengiso ezijolise kuzo kwiiNkonzo, okanye ezinye iipropathi zedijithali okanye usetyenziso ngokudibeneyo nomxholo wethu, ngokusekwe kulwazi esilunikwe ngabasebenzisi bethu kunye nolwazi esilunikiweyo. ngabantu besithathu abaziqokelele ngokwabo.
Ukhetho lwakho lweNtengiso
Abanye babanikezeli beenkonzo zomntu wesithathu kunye / okanye abathengisi banokuba ngamalungu eNkqubo yokuThengisa iiNethiwekhi (i-NAI) okanye iNkqubo yokuZilawula yedijithali yeDijithali (i-DAA) yeNkqubo yokuZilawula kwi-Intanethi. Ungandwendwela Apha , ebonelela ngolwazi malunga nentengiso ekujoliswe kuyo kunye neenkqubo zokuphuma kwamalungu e-NAI. Unokuphuma ekusebenziseni idatha yakho yokuziphatha esetyenziswa ngamalungu e-DAA ukusebenzela intengiso esekwe kumdla kwiindawo zomntu wesithathu Apha .
Ukuba ufikelela kwiiNkonzo ngokusebenzisa isicelo (okt, iselfowuni okanye ithebhulethi) unokukhuphela usetyenziso lweAppChoices kwivenkile yesicelo sakho (oko kukuthi, Google Play, Apple App Store, kunye neVenkile yeAmazon). Esi sicelo seDAA sivumela iinkampani ezithatha inxaxheba ukuba zinikeze ukuphuma kwiintengiso ezenziwe ngokwezifiso ezisekwe kuqikelelo malunga nomdla wakho owenziwe kukusetyenziswa kwesicelo sakho. Ngolwazi oluthe kratya, ndwendwela Apha .
Nceda uqaphele ukuphuma kwezi ndlela akukukhethi ekubeni unikwe intengiso. Uya kuqhubeka nokufumana iintengiso eziqhelekileyo xa ukwi-intanethi okanye kwisixhobo sakho.
Ixesha nexesha sinokunikezela ngendawo ethile okanye iinkonzo ezisisiseko, ezinje ngendawo yokuncedisa ukuyalela ukuhamba. Ukuba ukhetha ukusebenzisa iinkonzo ezisekwe kwindawo, kufuneka simane sifumana indawo okuyo ukuze sikubonelele ngeenkonzo ezisekwe kwindawo. Ngokusebenzisa iinkonzo ezisekwe kwindawo, usigunyazisa ukuba: (i) sifumane izixhobo zekhompyutha; (ii) urekhode, uqulunqe kwaye ubonise indawo okuyo; kwaye (iii) upapashe indawo okuyo kubantu besithathu abatyunjwe nguwe ngendlela yolawulo lokupapashwa kwendawo okukhoyo ngaphakathi kwezicelo (umzekelo, useto, ukhetho lomsebenzisi). Njengenxalenye yeenkonzo ezisekwe kwindawo, sikwaqokelela kwaye sigcina ulwazi oluthile malunga nabasebenzisi abakhetha ukusebenzisa ezo nkonzo ezisekwe kwindawo, ezinje nge-id yesixhobo. Olu lwazi luya kusetyenziselwa ukukunika iinkonzo ezisekwe kwindawo. Sisebenzisa ababoneleli beqela lesithathu ukunceda ukubonelela ngeenkonzo ezisekwe kwindawo ngokusebenzisa iinkqubo zeselfowuni (ngaphandle kokuba ukhetha ukuphuma kwezi nkonzo ezisekwe kwindawo kunye nababoneleli) kwaye sinikezela ngolwazi kubaboneleli ukubenza bakwazi ukubonelela ngeenkonzo ezisekwe kwindawo, ngokubonelela ukuba abo baboneleli basebenzisa olu lwazi ngokweSaziso sethu sabucala.
Sikunika ithuba lokulawula unxibelelwano oluvela kuthi. Kwanasemva kokubhalisela ileta enye okanye ezingaphezulu kwaye / okanye ukungena kwelinye okanye ngaphezulu izibonelelo zokufumana intengiso kunye / okanye unxibelelwano lokwazisa oluvela kuthi okanye amaqabane ethu esithathu, abasebenzisi banokukhetha ukuguqula ukhetho lwabo ngokulandela iiNgcaciso zoNxibelelwano kunye / okanye Ungabhalisi kwikhonkco elinikezwe nge-imeyile okanye unxibelelwano olufunyenweyo. Unokwazi ukutshintsha izinto ozikhethayo ngokuhlaziya iprofayili yakho okanye iakhawunti, kuxhomekeke ukuba yeyiphi na yeeNkonzo ozisebenzisayo. Nceda uqaphele ukuba ukuba unqwenela ukuzisusa kwincwadana yeendaba kunye / okanye ezinye ii-imeyile zokuthengisa ezivela kubantu besithathu ozivumeleyo ngeenkonzo, kuya kufuneka wenze njalo ngokunxibelelana nomntu wesithathu ochaphazelekayo. Nokuba ukhetha ukuphuma kwii-imeyile zentengiso, sinelungelo lokukuthumela ii-imeyile zentengiselwano kunye nezolawulo kubandakanya ezo zinxulumene neeNkonzo, izibhengezo zenkonzo, izaziso zotshintsho kwesi Saziso Sobumfihlo okanye eminye imigaqo-nkqubo yeeNkonzo, kunye nokunxibelelana nawe malunga nayo nayiphi na iimpahla okanye iinkonzo ozi-odoleyo.
Unokucela ukufikelela kulwazi osinike lona. Ukuba unqwenela ukwenza isicelo, nceda unxibelelane nathi usebenzisa iinkcukacha ezikwicandelo loQhakamshelwano nathi apha ngezantsi. Ukuba ungathanda ukuhlaziya, ukulungisa, ukulungisa okanye ukucima kwiziko ledatha yethu nayiphi na idatha yobuqu obuyingenise kuthi ngaphambili, nceda usazise ukungena ungene kunye nokuhlaziya iprofayile yakho. Ukuba ucima ulwazi oluthile akunakukwazi uku-odola iinkonzo kwixesha elizayo ngaphandle kokuphinda ungenise olo lwazi. Siya kuthobela isicelo sakho ngokukhawuleza kangangoko kunokwenzeka. Kwakhona, nceda uqaphele ukuba siyakugcina iiNkcukacha zaBantu kwindawo yethu yokugcina ulwazi nanini na xa kufuneka senze njalo ngokomthetho, ngenxa yezizathu zokusebenza ezifanelekileyo, okanye ukugcina iinkqubo zeshishini ezifanayo.
Nceda uqaphele ukuba kufuneka sigcine ulwazi oluthile ngeenjongo zokugcina irekhodi kunye / okanye ukugcwalisa nayiphi na intengiselwano oqale ngayo ngaphambi kokucela olo tshintsho okanye ukucinywa (umzekelo, xa ufaka ipromoshini, awungekhe ukwazi ukutshintsha okanye ucime ubuqu bakho. Idatha ebonelelweyo de kube emva kokugqitywa kolo nyuso). Siza kugcina iiNkcukacha zaKho ixesha elifunekayo ukufezekisa iinjongo ezichazwe kulo Mgaqo-nkqubo ngaphandle kokuba ixesha elide lokugcina lifunwa okanye livunyelwe ngumthetho.
Ukuba ungumhlali woMmandla wezoQoqosho waseYurophu (i-EEA), unelungelo: (a) lokucela ukufikelela kwiNkcukacha zaKho kunye nokulungiswa kweNkcukacha eziNgachanekanga; (b) cela ukucinywa kweenkcukacha zakho; (c) ukucela izithintelo ekusetyenzisweni kweDatha yakho yoBuntu; (d) ukwala ukuqhubekeka kweenkcukacha zakho; kunye / okanye (e) ilungelo lokuphatheka kwedatha (ngokudibeneyo, izicelo ze-EU).
Singasebenza kuphela izicelo ze-EU ezivela kumsebenzisi onesazisi sakhe esiqinisekisiweyo. Ukuqinisekisa isazisi sakho, nceda unikeze ngedilesi yemeyile okanye [URL] xa usenza isicelo se-EU. Ngolwazi oluthe kratya malunga nokuba ungafikelela njani kwiDatha yobuNtu nasekusebenziseni amalungelo akho, ungangenisa isicelo apha ngokukhetha ukuba ndingumhlali wase-EU kwaye ndingathanda ukusebenzisa amalungelo am. Unelungelo lokufaka isikhalazo kwigunya lolawulo. Ukujonga ulwazi olongezelelweyo malunga nokuziphatha kwentengiso kunye nokulawula ukhetho lwakho, ungakwenza oko ngokundwendwela: http://www.youronlinechoices.eu/ .
Ukuba ukwamkele ukusebenzisa kwethu ikuki kunye nobunye ubuchwephesha bokulandela umkhondo, siya kuqokelela ulwazi lwakho ngokungqinelana nesi Saziso Sobucala ngokusekwe kwimvume yakho eqinisekisiweyo, onokuyirhola nangaliphi na ixesha ngeendlela ezinikezelwe apha. Ukuba awwamkelanga, siya kuqokelela kuphela idatha yakho yobuqu ngokusekwe kwiminqweno yethu esemthethweni.
Similisele amanyathelo okhuseleko afanelekileyo nasengqiqweni obuchwephesha okunceda ukukhusela iiNkcukacha zakho zobuqu kwintshabalalo yengozi okanye engekho semthethweni, ilahleko, utshintsho, ukusetyenziswa gwenxa, okanye ukufikelela okungagunyaziswanga okanye ukuvezwa; Ngelishwa, nangona kunjalo, akukho dluliselo lwedatha kwi-Intanethi olunokuqinisekiswa ukuba lukhuselekile nge-100%. Ngenxa yoko, ngelixa sizama ukukhusela uLwazi lwakho loMsebenzisi, asinakuqinisekisa ngokhuseleko lwalo. Usebenzisa iiNkonzo kwaye usinika ulwazi ngokuzimisela nangomngcipheko. Ukuba unesizathu sokukholelwa ukuba ukusebenzisana kwakho nathi akusakhuselekanga (umzekelo, ukuba uziva ngathi ukhuseleko lwayo nayiphi na iakhawunti onayo lusengozini), nceda usazise kwangoko ngengxaki ngokunxibelelana nathi usebenzisa iinkcukacha kwicandelo loNxibelelwano nathi apha ngezantsi.
IiNkonzo ziqulathe amakhonkco kwezinye iiwebhusayithi esingazilawuliyo, kwaye iiNkonzo ziqulathe iividiyo, intengiso kunye nomnye umxholo obanjiweyo kwaye uhanjiswa ngabantu besithathu. Asinaxanduva lokuzibandakanya ngasese kuye nawuphi na umntu wesithathu. Sinokudibanisa nabantu besithathu abaza kunxibelelana nawe phantsi kwemigaqo yenkonzo. Omnye umntu wesithathu nguYouTube. Sisebenzisa iinkonzo zeYouTube API kwaye ngokusebenzisa iiSayithi okanye iiNkonzo, uyavuma ukuba ubotshelelwe yimigaqo yeNkonzo ye-YouTube ebekwe Apha .
Iinkonzo zenzelwe abaphulaphuli ngokubanzi kwaye azenzelwanga ukuba kwaye mazingasetyenziswa ngabantwana abangaphantsi kweminyaka eli-13. Asiqokeleli sazi ulwazi oluvela kubantwana abangaphantsi kweminyaka eli-16 kwaye asijolisisi iiNkonzo kubantwana abaphantsi Ndineminyaka eli-16 ubudala. Ukuba umzali okanye umgcini womntwana wazi ukuba umntwana wakhe usinike ulwazi ngaphandle kwemvume yakhe, kufuneka aqhakamshelane nathi esebenzisa iinkcukacha ezikwicandelo loQhakamshelwano elingezantsi. Siza kuyicima loo nkcukacha kwiifayile zethu ngokukhawuleza.
Ngokuxhomekeke kulo mhlathi ulandelayo, sicela ukuba ungasithumeli, kwaye ungachazi, nayiphi na idatha yobuqu njengoko eli gama lichazwa phantsi kwemithetho esebenzayo yokhuseleko lwedatha kunye nemfihlo (umzekelo, iinombolo zokhuseleko loluntu, ulwazi olunxulumene nobuhlanga okanye ubuhlanga , izimvo zopolitiko, inkolo okanye ezinye iinkolelo, ezempilo, ibhayometri okanye iimpawu zofuzo, imvelaphi yolwaphulo-mthetho okanye ubulungu bemanyano yabasebenzi) kwiNkonzo okanye ngenye indlela kuthi.
Ukuba uthumela okanye uxela nayiphi na iNkcukacha yobuqu kuthi okanye kuluntu ngeeNkonzo, uyavuma ukuba sisebenzise kwaye sisebenzise idatha yobuqu ngokungqinelana nesi Saziso Sobumfihlo. Ukuba awuvumi ukuqhubekeka kunye nokusetyenziswa kweDatha yobuNtu enjalo, akufuneki ungenise umxholo onjalo kwiiNkonzo zethu, kwaye kufuneka unxibelelane nathi usazise kwangoko.
Sihlaziya esi Saziso sabucala amaxesha ngamaxesha ngokokubona kwethu kwaye siya kukwazisa ngalo naluphi na utshintsho lwezinto kwindlela esiphatha ngayo iiNkcukacha zaKho ngokuthumela isaziso kwiindawo ezifanelekileyo zeNkonzo. Siza kukubonelela ngesaziso ngezinye iindlela ngokubona kwethu, ezinje ngenkcukacha zonxibelelwano osinike zona. Naluphi na uhlobo oluhlaziyiweyo lwesi Saziso Sobumfihlo siza kusebenza kwangoko xa kuthunyelwa iSaziso Sobumfihlo esihlaziyiweyo ngaphandle kokuba kuchazwe ngenye indlela. Ukuqhubeka kokusebenzisa iiNkonzo emva komhla wokuqala weSaziso esiNgasese esihlaziyiweyo (okanye esinye isenzo esichazwe ngelo xesha) siyakwenza imvume yakho kolo tshintsho. Nangona kunjalo, asiyi kuthi, ngaphandle kwemvume yakho, sisebenzise iiNkcukacha zakho buqu ngendlela eyahlukileyo kunale ibichaziwe ngexesha lokuqokelelwa kweenkcukacha zakho.
Ukuba unemibuzo malunga nesi Saziso Sobucala, nceda ukhululeke ukunxibelelana nathi nge-imeyile apha: cacem_do@.com
ophumelele uthando Island australia 2018
ngabani ixesha andy murray edlala namhlanje
imhlophe okanye imnyama ukungabikho kombala
333 intsingiselo - uthando
qhubeka ubona u666
isityalo se-clitoria bush